Ihe ị ga - eme mgbe ị gara Malta | Akụkọ Njem
Ihe ị ga - eme mgbe ị gara Malta
Mariela Carril | | Nduzi, Malta
Malta bụ agwaetiti dị na Mediterenian, otu Republic nke ọ dị naanị kilomita iri asatọ site n’ebe ndịda ụsọ oké osimiri Italytali na ihe na-erughị 300 si Libya na Tunisia. Ọ bụ ala nke anyanwụ, anyị nwere ike ịsị, ebe ọ na-atọkarị ụtọ Daysbọchị 300 nke anwụ na-acha kwa afọ Ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye na mmiri ahụ doro anya na mmiri dị ọcha, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nnukwu ebe ezumike.
Malta nwere ihe niile: ala na ezigbo ihu igwe, kamakwa ọtụtụ puku afọ nke akụkọ ntolite site na mbu, site na etiti oge rue oge nke oge a. A na-adọrọkarị m mkpọmkpọ ebe na ọwa mmiri ha ndị a pịrị apị n'ime okwute ala, yabụ Malta bụ akara ajụjụ yana ebe ndị njem. Mystery na ịma mma, lee nchikota!
2 Ihe ị ga-eme ma hụ na Malta
Agwaetiti nwere onwe ya na Great Britain na 1964 mana ọ ka nwere akara bekee n’okporo ámá ya, igbe ekwentị na igbe ozi uhie. Luckily nri dị oke Mediterenian, ee. Maltaga Malta ọ bụ ihe amamihe dị na-aga na mgbụsị akwụkwọ na mmiri ya mere otu oge kachasị mma ị gara na-amalite. Oge oyi anaghị adaba ebe ọ bụ na mmiri nwere ike zoo ma ọnọdụ okpomọkụ anaghị arịgo karịa 15ºC, mana ọ bụrụ na ị jidesiri ike na mmefu ego gị, ọ ga-adịrị gị mma n'ihi na ọnụahịa ụlọ na ụgbọ elu dị ọnụ ala.
Ego na Malta bụ euro ma ana m enye gị ndụmọdụ ka ị lelee weebụsaịtị nke Malta tupu ị gaa n'ihi na ọ bara oke uru. Ozugbo Valleta, isi obodoNa-enwekarị ụlọ ọrụ ndị njem nleta na mpaghara aka n'ihi na n'eziokwu ọ bụghị otu agwaetiti kama ọ bụ ọtụtụ ma ebe ị nọ ebe ahụ, ị ​​kwesịrị ịma ha niile.
Bụ Malta, Comino na Gozo. N’etiti ebe ndị njem nlegharị anya ị nwere ụsọ osimiri, ebe nrụọrụ ochie, ebe ngosi ihe mgbe ochie, veranda, ogige ochie na ụlọ elu ochie na n'etiti saịtị niile Ihe Nketa Worldwa. Lee, ahapụrụ m gị ozi gbasara ihe ị ga - eme ma hụ na agwaetiti ọ bụla. Ka anyị bido na Malta.
Ihe ị ga-eme ma hụ na Malta
Ọ bụ agwaetiti kacha ibu anyị nwere ike ịkọwa ya dị ka nnukwu ụlọ ngosi ihe nka mepere emepe. Gbanye Valletta, la isi obodo, nke akpọrọ aha onye guzobere Order of Saint John, Jean Parisot de la Valete, bụ a obodo e wusiri ike Nnukwu ihe wuru n’elu Ugwu Sceberras. E wuru ebe ewusiri ike na 1566 na n'ime nanị afọ 15, etolite bastions, mgbidi, mgbidi na ọbụna katidral dị n'ime ya dị ndụ.
Ọ bụ obodo ije, juputara oge niile, nwere ụlọ akụkọ ihe mere eme, ihe akpụrụ akpụ, isi iyi na mpempe akwụkwọ ebe niile. Enwere ụlọ oriri na ọesụ andụ na ụlọ ahịa na ebe ọ bụla, ee ma ọ bụ ee, ị ga-agagharịrịrị na ya. Dee ihe ndị a nlegharị nleta:
National Museum of Archaeology: ụlọ "chi nwanyị nke ọmụmụ" nke a ma ama na ụwa, mana enwekwara ọtụmọkpọ ndị Phoenicia, ụdị nke ụlọ nsọ ochie na ọtụtụ ndị ọzọ.
Katidral San Juan na ebe ngosi nka
Chọọchị nke hipgbọ mmiri nke San Pablo
Ọnụ ụzọ ámá obodo
Nkera nke Saint Elmo
Warlọ ihe nkiri National War
National Museum nke Ọma Arts
Ọ bụrụ na ịmachaghị ihe gbasara Malta na ịchọrọ nseta ihuenyo n'ozuzu, ị nwere ike ịga na Center Mgbakọ Mediterranean, na ụlọ ọgwụ nke XNUMXth nke Order nke Saint John, Sacra Infermeria, dị ka Vidiyo 45 nkeji na-akọ banyere puku afọ asaa nke Malta. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịga njem nlegharị anya nke ụlọ ochie na ọmarịcha ụlọ.
Ije ije site na obodo ị ga-ahụ ihe omimi kachasị amasị m na Malta: nke grooves na-abịa ma na-aga ha na-abanyekwa n'oké osimiri. Ha na-aga abụọ abụọ, dị ka okporo ụzọ ndị na-aga n ’otu, ma bụrụ ndị a tụrụ atụ na onye ma onye na ihe kpatara ya ji mee okwute ahụ. Enwere otutu echiche ma eziokwu bu ihe anakpo. Ha karịrị puku afọ isii, ị nwekwara ike ịme a mgbede mgbede na ụgbọ ala na-emeghe. Ọ dị n’asụsụ iri na isii ma were awa anọ mana enwere ezumike nkeji iri isii.
Otu n'ime njem ị ga - eme si Malta bụ ịgafe agwaetiti Gozo, isuo dị jụụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ime obodo ma pere mpe. Ọ bụ agwaetiti a na-akọkarị na Calypso nke a na-egosipụta na Odyssey, agwaetiti nke ọdịdị ala jupụtara na ala na oke osimiri dị ebube nke nwere ime ụlọ ụka ochie na ugbo Baroque.
Ha zoro ezo n’okpuru mmiri ya magburu onwe amaba na saịtị ma n'elu ala ọ dịghịkwa enwe na-adọrọ mmasị ma, ebe ọ bụ na e nwere ụlọ nsọ oge ochie, dị ka Ggantija, na ebe ochie. Ọ bụrụ na ịnọ ụra ọ nwere ndụ abalị na-atọ ụtọ nke ukwuu na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na onye ọ bụla oge na-eweta ya kalenda nke omenala ihe. Na mgbụsị akwụkwọ, dịka ọmụmaatụ, enwere Ememe Mediterranean na njem mmụta, ịga ije, ihe omume gastronomic na ihe ngosi nka.
Ọ bụ agwaetiti nke ndị ọkụ azụ na kpomkwem na ala gbara osimiri okirikiri obodo ị ga-atọ nke kacha mma azu na Erimeri. Agwaetiti ahụ na-enye ndị njem nlegharị anya nke ya na-ejegharị na nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, mmanụ oliv, mmanya ya, dịka ọmụmaatụ.
Agwaetiti dị n’etiti Malta na Gozo na tọ dụ g'ọ ka Gozo: 3.5 square kilomita. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ndị njem nleta dị ole na ole, ndị ọzọ na-awagharị na ndị mmadụ na-enwe mmasị na mmiri mmiri a bụ ebe ị na-agaghị echefu ọbịbịa gị na Malta. Fọrọ nke nta ka ọ dịghị onye bi ebe a, anabataghị ụgbọ ala na enwere naanị otu họtel.
O nwere a acha anụnụ anụnụ Lagoon nnukwu gburugburu na-acha ọcha ájá na uzo mmiri. E nwere ụsọ osimiri ndị ọzọ, nke San Niklaw na Santa Marija bays, yabụ ndị mmadụ na-abịa ụbọchị ahụ, na-aga ije, na-acha anwụ anwụ, na-egwu mmiri ma were ezigbo foto. Ma ọ bụrụ na ị hụrụ udo oge ezumike a n'anya, ị nwere ike ịnọ na họtel.
UNESCO ekwuputala ụlọ arụsị megalithic nke Maleta na Gozo World Heritage, ụlọ arụsị asaa dị iche na ibe ha ma dị ebube. Na Gozo enwere ụlọ arụsị abụọ nke Ggantija, nnukwu ihe owuwu site na Bronze Age, na Malta ị ga-ahụ ndị nke Tarxiwn na Hagar Quinn Mnajdra. Ọ bụrụ na anyị na-atụle ụkọ nke akụ, ọ bụ ihe ịtụnanya na e wuru ha.
Izu abụọ na Malta ezuola maka ịwụli site n'otu agwaetiti gaa n'otu agwaetiti ma nwee ọ enjoyụ zuru oke na atọ. Otu puku afọ nke micro-eluigwe na ala nke akụkọ ntolite, ọdịbendị, njem na gastronomy nke na-adịghị anya. Na-amaja?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Malta » Ihe ị ga - eme mgbe ị gara Malta